विद्युत ट्रिपिङले उद्योगमा कस्ता समस्या निम्त्याएको छ ? :: मध्य नेपाल संवाददाता :: विद्युत ट्रिपिङले उद्योगमा कस्ता समस्या निम्त्याएको छ ?
विद्युत‘ ट्रिपिङलेको कारणले भन्दा धेरै नै उद्योग मार्कामा परेका छन। करिडोरअन्तर्गतको ६६ केभीए प्रसारण लाइन र अर्को लाइनमा पनि यो समस्या रहेको छ । ‘दुवै प्रसारण लाइनमा एकैखाले समस्या छ, ‘ट्रिपिङ हुने र २–२ घण्टासम्म पनि बत्ती जाने समस्याले उद्योगीहरु हैरान छन ।’उद्योगमा एकपटक विद्युत् अवरुद्ध भएपछि त्यसको धेरै असर पर्न जाने र ‘फलाम, डन्डी, औषधी उद्योग तथा ब्वायलर मेसिन भएका उद्योगलाई धेरै मार पर्न जान्छ,’ भने, ‘एकातिर कच्चा पदार्थ नोक्सान हुन्छ, पुनः प्लान्ट चालु गर्न पनि ठूलो लागत पर्न जान्छ ।’ विद्युतको यो समस्याले उद्योगका उत्पादनको गुणस्तरमा पनि ह्रास आइरहेको छ ।
लाइनबाट सबै चिज बन्ने हो । लाइन बिना केही पनि काम हुदैन् । बेला–बेलामा विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्दा धेरै नै समस्या भएको छ । फलाम तताउँदा तताउँदै लाइन जान्छ र मिस्त्रीहरु घर जान्छन । जब लाइन आएर बोलाउँदा मिस्त्रीहरु आउँदा लाइन जाने समस्या रहेको छ । लाइनको कारणले कतिपय कामहरु रोकिएका छन् । १,२ घण्टा लाग्ने काम दिन भरमा पनि गर्न कठिन हुन्छ ।
लेथमा काम गर्न धेरै समस्या भएको छ । टेक्टरको काममा, हबमा, कलर साइज गर्दा, बेल्डिङ गरेको बेलामा लाइन कट्दा काम गर्न अफ्ट्यारो हुने किसानहरुलाई पनि काम गराउन आएको बेला १,२ घण्टामा हुने काम लाइनको समस्याले बढी समय लाग्ने गर्दछ । गर्मी मौसममा दिनभर नै पालो पर्खेर बस्नुपर्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् । पढने विद्यार्थीहरुलाई पनि लाइनको कारणले समयमा पढ्न लेख्न नपाउने समस्या भएको छ । खाना खाने, सुत्ने समयमा पनि लाइन काट्दा सबै मानिसलाई मानसिक रुपमा नै असर परेको छ ।
विद्युत ‘ट्रिपिङले उद्योगमा धेरै नै समस्या निम्त्याएको छ । नेपालकै ठूलो औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्वाध रूपमा विद्युतको आपूर्ति व्यवस्था मिलाए पनि विद्युत् ट्रिपिङले उद्योगी–व्यवसायी हतास बनेको छन ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि विद्युतको सहज र निर्बाध उपलब्धताका कारण उद्योग–प्रतिष्ठान आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका थिए र पर्याप्त विद्युत् उपलब्धताबाट दैनिकीसमेत सहज हुँदै गइरहेको थियो । तर, केही दिनदेखि उद्योगमा विद्युतको ट्रिपिङले उद्योग–प्रतिष्ठानको कच्चा पदार्थ नोक्सान भईरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २९, २०७९ १३:०४